Kava Extract - J & S မှရုက္ခဗေဒ
[လက်တင်အမည်] Piper methyicium L.
[Net ကအလေးချိန်] 25kgs / စည်
Kava လည်း Piper methysticum, kava kava အဖြစ်လူသိများနှင့် '' Awa, တောင်ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာအတွင်းရှိကျွန်းများမှသေးငယ်တဲ့ချုံဇာတိဖြစ်ပါတယ်။ အမြစ်နှင့်အဓိကအားထားဟာဝိုင်ယီ, ဖီဂျီနှင့် Tonga အတွက်နှစ်ပေါင်းရာချီများအတွက်လူမှုရေးအရအခမ်းအနားတွေကိုအသုံးပြုထားပြီးကြောင်း non-အရက်, psychoactive အဖျော်ယမကာသို့လုပ်နေကြသည်။
Kava အစဉ်အလာမြေပြင်အမြစ်အားမရသဖြင့်ကိုပြင်ဆင်ကာစိမ်အိတ်ထဲသို့ရပ်တ, ရေအတွက် submerging နှင့်တစ်ဦးကြီးများ, ထွင်းထု, သစ်သားပန်းကန်လုံးထဲသို့သီးဖျော်ရည်ကိုဖျစ်ညှစ်သည်။ အုန်းသီးဝက် shell ကိုခွက်နှစ်ပြီးသောနှင့်ပြည့်ရကြ၏ - လာကြတယ်ပန်းကန်စတိုင်။ ခွက်ဒါမှမဟုတ်နှစ်ခုသောက်သုံးပြီးနောက်အပန်းဖြေနှင့်အတူပေါင်းစပ်မြင့်အာရုံကိုတစ်ဦးခံစားချက်အပေါ်လာစတင်ခဲ့သည်။ ကပြော့ဖြစ်သော်လည်းထိုသို့အတှေးထဲမှာအရက်နှင့်မတူဘဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းရှိနေဆဲဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါအရသာအကြီးအကျယ် inoffensive ဖြစ်ပါသည်, သို့သော်အချို့ကြောင့်ရန်အသုံးပြုတဲ့ယူကွောငျးတှေ့; တကယ့်ဖြစ်သောကြောင့်မြေသားအရသာအဘို့သင့် preference ကိုအပေါ်မူတည်ပါသည်။
[Kava အသုံးပြုခြင်းမှကို Safe ဖြစ်ပါတယ်]
စိုးရိမ်စိတ်လက္ခဏာတွေမှသက်သာရာရစေရန် kava များ၏လုံခြုံပြီးထိရောက်သောအကျိုးခံစားခွင့်လည်း, တစ်ဦး Meta-analysis သည်အတွက်လက်တွေ့ Psychopharmacology ၏ဂျာနယ်၌၎င်း, နောက်တဖန် 2001 ခုနှစ်တွင်အလားတူအရေးပါပြန်လည်သုံးသပ်အတွက် 2000 ခုနှစ်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခုနစျပါးသောလူ့လက်တွေ့စမ်းသပ်မှုတွေ၏စနစ်တကျစာရင်းအင်းပြန်လည်သုံးသပ်ထောက်ခံခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းအသည်းအဆိပ်နှင့်ဆက်စပ်သောသိသိသာသာဆိုးရွားသောသက်ရောက်မှုများမတှေ့ခဲ့ပေ။
နိဂုံးချုပ်မှာအသည်းအသည်းပျက်စီးမှု၏အဓိကအကြောင်းရင်းဖြစ်သောဆေးညွှန်းနှင့်အမဟုတ်သောဆေးညွှန်းမူးယစ်ဆေးအဖြစ်အရက်, အပါအဝင်များစွာသောတ္ထုများဖြင့်ထိခိုက်နေပါတယ်။ ကျနော်တို့ဟင်းသီးဟင်းရွက်အသည်းအပါအဝင်အလားအလာ interaction ကများနှင့်အဆိပ်အတောက်နှင့် ပတ်သက်. သင့်လျော်သောလေးစားမှု, နဲ့ကုသခံရဖို့အစွမ်းထက်ဆေးဝါးများ, ဖြစ်ကြောင်းသတိထားမိဖြစ်ရမည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, ဘေးကင်း Kava kava ရဲ့အနားသတ်ဝေးကဆေးဝါးနှင့်ညီမျှမယ့်ထက်မလွန်။
Kava ရဲ့ပြဿနာများ၏နံပါတ်အများစုအထူးသစိတ်ဖိစီးမှု, စိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့်နှောင့်အယှက်အိပ်စက်ခြင်းပုံစံများကိုထေမိကူညီပေးနိုင်ပါသည်။ သို့သော် kava ရဲ့ anxiolytic (Anti-ထိတ်လန့်သို့မဟုတ် Anti-စိုးရိမ်စိတ်အေးဂျင့်) နှင့်ငြိမ်သက်ဂုဏ်သတ္တိများတခြားစိတ်ဖိစီးမှုနှင့်စိုးရိမ်သောကနှင့်ဆက်စပ်သောရောဂါ offset နိုင်ပါတယ်။
ပူပန်များအတွက်ကုထုံးအဖြစ် 1. Kava
2. Kava သွေးဆုံးစိတျအပွောငျးအလဲကုစားနိုင်ပါစေ
5. ဆေးလိပ်သောက် Aid ကို Quit
တစ်ဦး analgesic အဖြစ် 6. တိုက်ခိုက်ရေးနာကျင်မှု
ယခင်: Huperzine တစ်ဦးက
နောက်တစ်ခု: Marigold ထုတ်ယူ
Ginkgo Biloba တိုင်းရင်းဆေးပင် Extract
၏ Citrus Aurantium Extract
5-HTP အကျိုးကျေးဇူးများကိုလည်း oxitriptan (INN) အဖြစ်လူသိများအများစုက 5-HTP တစ် Woody တောင်တက်ချုံဇာတိ၏အစေ့ကနေထုတ်ယူတာဖြစ်ပါတယ် ...